रुखको विलौना | मझेरी डट कम
kbs — Thu, 02/24/2011 - 18:27
मुना २०६७ माघ
'रुखले वातावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्नमा मद्दत गर्छ । बाढीपहिरो रोक्छ र मानिसलाई नभइनहुने अक्सिजन प्रदान गर्छ । त्यसैले रुख मानिसका लागि धेरै गुणी वनस्पति हो । रुखलाई काट्यो भने उसलाई पनि मानिसलाई जस्तै दुख्छ ।' स्कुलमा विज्ञान पढाउने सरले भन्नुभएको यो कुरा मनमा गुन्दै रमा स्कुलबाट घर फर्किरहेकी थिई । घर नजिकै आइपुग्दा उसले छ्याक्कछ्याक्क गरेर केही काटेको आवाज सुनी । त्यो उसको बुबाले रुख काट्दै गरेको आवाज थियो । रमाले परैबाट आफ्नो बुबाले घरभन्दा अलि पर गोठ नजिकैको रुख काट्दै गरेको देखी । बुबाले रुख काट्दै गरेको देखेर दौड्दैँ बुबानेर गई र आँत्तिदै भनी, 'बुबा बुबा, किन रुख काट्नुभा'को ?'
'दाउरा बाल्नलाई ।' रमाको बुबाले रुख काट्दाकाट्दै भन्नुभयो ।
'हाम्रो सरले भन्नुभा'को रुखलाई काट्नुहुन्न रे । रुखले बाढीपहिरो रोक्छ र मानिसलाई नभइनहुने अक्सिजन दिन्छ रे ।' रमाले स्कुलमा सरले भन्नुभा'को एकएक क्ुरा सम्झिंदै भनी ।
'अहिलेसम्म बाढीपहिरो गा'को थाहा छैन । यो जाबो एउटा रुख काट्दैमा कसरी पहिरो जान्छ ।' यसो भन्दै रमाको बुबा फेरि धमाधम त्यो रुख काट्न थाल्नुभयो ।
'अनि थाहा छ बुबा, रुखलाई काट्यो भने त मानिसलाई जस्तै रुखलाई पनि दुख्छ रे ।' यसो भन्दै रमा बुबाको नजिक गई ।
'के नचाहिँदो कुरा गरिरहन्छेस् हँ तँ ? जा, खुरुक्क घरमा गएर खाजा खाएर पढ्न बस् ।' रमाको बुबाले निधारको पसिना पुछ्दै भन्नुभयो र फेरि बञ्चरोले रुख काट्न थाल्नुभयो ।
रमालाई बुबाले रुख काटेको देखेर सार्‍है नरमाइलो लाग्यो । बञ्चरोको प्रहारले रुखबाट चोक्टाचोक्टा निस्केको देखेर रमालाई आफ्नै शरीरमा घाउ लागेजस्तो लाग्यो र आफैंलाई कताकता दुखेजस्तो भयो । बुबाले बञ्चरोले रुख काट्दा रुखले रुँदै ऐयया ऐयया भनेजस्तो लाग्यो । अनि उसलाई त्यसैत्यसै रुन मन लागेर आयो । बञ्चरोको प्रहारले रुखमा घाउ लागेको ठाउँबाट अलिअलि पानी निस्केजस्तो देखेर रमालाई साँच्चै नै त्यो रुखको घाउबाट रगत बगेजस्तो लाग्यो र त्यो रुख रोइरहेजस्तो लाग्यो । अनि उसलाई पनि साँच्चै नै रुन मन लाग्यो । अनि उसले रुञ्चे स्वरमा बुबालाई भनी, 'हेर्नुस् त बुबा, रुखलाई घाउ लागेर दुखिरहेछ, त्यसैले त्यो रोइरहेछ । त्यसको घाउबाट रगत पनि बगिरहेछ ।'
'होइन के भन्छे यो ? तँ बहुलाइस् कि के हो छोरी ? कहीं रुख पनि रुन्छ ?' यसो भन्दै रमाको बुबाले केही बेर रुख काट्न छोडेर यताउता हेर्नुभयो । एक छिन् ध्यान दिएर सुन्नुभयो, कतै साँच्चै नै रुख रोइरहेको छ कि भनेर तर उहाँले केही पनि सुन्नु भएन । त्यसपछि उहाँ फेरि रुख काट्न थाल्नुभयो ।
रमाले बुबालाई रुख काट्नबाट रोक्न सकिन । उसले बुबाको हातबाट बञ्चरो खोसेर लिने आँट पनि गर्न सकिन । यसो गर्दा बुबा रिसाएर आफैँलाई पिट्नुहुन्छ भनेर ऊ डराई ।
रमाको बुबाले रुख काटिरहनु भयो । रमा चुपचाप उभिएर बुबाले रुख काटेको हेरिरही । रमालाई कताकता त्यो रुखले ऐयया ऐयया भन्दै विलौना गरेजस्तो लागिरहृयो । रुखले विलौना गरेको त्यो आवाज उसको कानमा गुन्जिरहृयो तर उसको बुबालाई भने त्यो आवाजको अलिकति पनि हेक्कै भएन । बुबाको त्यस्तो निर्दयता देखेर रमालाई सार्‍है दुख लाग्यो ।
रमाको बुबाले रुखको फेद पूरै काट्नु भयो । त्यसपछि त्यो रुख ठूलो आवाज निकालेर भुइँमा ढल्यो । त्यसरी भुइँमा ढल्दाखेरी त्यो रुखले ' ऐयया आमा, म मरेँ' भनेजस्तै लाग्यो रमालाई । त्यसपछि रमालाई पनि रुन मन लाग्यो । उसले आफूलाई समाल्नै सकिनँ । अनि ऊ पनि सुँक्कसुँक्क गरेर रुन थाली । रुख नभएकाले अबको वषर्ामा त्यहाँ पहिरो जान्छ कि भनेर रमालाई पीर पनि पर्न थाल्यो तर उसको बुबालाई भने केही मतलबै थिएन । उनी खालि दाउराको जोहो गर्ने कुरामा मात्रै एकोहोरो लागेका थिए । उनले भविष्यको बारेमा सोचेकै छैनन् । बरु रमा त्यसरी रोएको देखेर उनले हाँस्दै भने, 'मेरी छोरी त कस्तो कमलो मनकी रहिछन्, रुखलाई काट्दा पनि रुने ।'
केही समय बित्यो । वषर्ा पनि लाग्यो । चारपाँच दिनसम्म लगातार पानी परिरहृयो । रमाको घर वरिपरिबाट पानीको ठूलो भेल बग्यो । रमालाई कताकता आफ्नो घर पनि बगाउँछ कि भन्ने डर लाग्यो । यतिखेर भने रमाको बुबालाई पनि त्यो पानीको ठूलो भेलले घरलाई बगाउँछ कि भन्ने डर लाग्यो तर उनले यस्तो डर कसैलाई देखाएनन् । आफ्नो मनको कुरा मनैमा राखिरहे ।
एक दिन बिहान सबेरै पानी परिरहेको बेलामा रमाको घरभन्दा अलि पर गोठनेर ठूलो आवाज आयो । सबैले पानीले गर्दा गोठ भत्कियो कि भन्ने सोचे । उज्यालो हुनेबित्तिकै सबैजना त्यहाँ हेर्न गए । त्यहाँको दृश्य देखेर सबैजना चकित् परे । उनीहरूको गोठ त पहिरोले खाइसकेको थियो । पहिरोमा पुरिएर उनीहरूको एउटा गाई र दुई वटा बाख्रा पनि मरिसकेका थिए । त्यसरी पहिरोले आफ्नो गोठ पुरेको र त्यसमा परेर गाई र बाख्रा मरेको देखेर रमाको बुबाले आँखाभरि आँसु पार्दै थाप्लामा हात राखेर भन्नुभो', 'कस्तो दुःख आइलाग्यो ।'
बुबाको कुरा रमाले पनि सुनिरहेकी थिई । त्यसैले उसले भनी, 'त्यतिखेर हजुरले रुखको आवाजलाई सुन्ने चेष्टा नै गर्नुभएन, यो सबै त्यसैको फल हो ।'
रमाको बुबालाई बल्ल आफ्नो गल्ती महसुस भयो । उहाँलाई आफूले रमाको कुरा नसुनी रुख काटेकोमा ज्यादै पछुतो पनि लाग्यो । अनि उहाँले भन्नुभो, 'बल्ल मेरो आँखा खुल्यो । अब म एउटा पनि रुख काट्दिनँ । बरु बारीको वरिपरि चारैतिर रुखैरुख रोप्छु ।'
बुबाको कुरा सुनेर रमा पनि खुसी भई । त्यतिखेरै उनीहरू रुखको विरुवा लिन नर्सरीतिर लागे ।
अचेल जमाना खराब छ